Iyo yekutanga modhi yeinotevera iPhone 7 inogona kunge iri 32 GB | IPhone nhau
Iyo yepasi modhi yeinotevera iPhone 7 inogona kunge iri 32 GB
Vazhinji vanga vari vashandisi avo vanonyanya kuitira zvikonzero zvehupfumi zvinogara zvichisarudzira iyo 16 GB modhi, modhi iyo pakutanga shanduko inova dambudziko kana uchitanga kurekodha mavhidhiyo nemifananidzo, kunyanya nemhando dzekupedzisira dzinotipa mukana wekurekodha mu4k mhando.
Muhurukuro, Eddy Cue akataura kuti 16GB iri saizi yakanaka kubvira gore rekuchengetedza masevhisi ave akanyanya kufarirwa nevose vashandisi. Kufunga ikoko kungave kwakanakira dai munyika dzese mareti emitengo aive asina muganho uye taikwanisa kurodha chero zvemukati kune yedu iPhone kubva kwese kwatinenge tisingade kubatana kweWi-Fi.
Zvinoenderana neHS Technology, iyo inotevera iPhone 7 yaizove sey base modhi modhi ine chinzvimbo che32 GB, zvakapetwa kairi modhi yazvino, iyo yaizobvumidza vashandisi vane simba rekutenga rakaderera kunakidzwa neiyo iPhone ine saizi inogamuchirwa pasina kumanikidza isu kuti titore iyo iPhone yega yega nhatu kana katatu patinenge tichida kuti tikwanise kuenda kune chiitiko chatina akaronga kutora mamwe mavhidhiyo kana mapikicha kupfuura muzuva nezuva.
Uye zvakare, muongorori weiyo yakasimba IHS Technology anotsigira kuti inotevera iPhone 7 yaizovewo ne2 GB ye RAM, izvo zvisiri pachena ndezvekuti Apple yaizoramba ichipa 4,7-inch modhi kana kuwedzera saizi screen kusvika mashanu. Mune izvo zvinowirirana ndizvozvo iyo 5,5-inch modhi, iPhone 7 Plus yaizove ne3 GB ye RAM, mukuwedzera kune mbiri kamera uye mamwe mabasa matsva anoenderera nekusiyanisa diki modhi kubva kune iyo Plus Parizvino uye kubvira pakauya iyo iPhone 6, Apple iri kupa iyo 16, 64 uye 128 GB mamodheru ane mutsauko pakati peimwe modhi yemamiriyoni zana, kunyangwe kune iyo kambani inongoda mashoma maeuro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Iyo yepasi modhi yeinotevera iPhone 7 inogona kunge iri 32 GB
Mario salvatore akadaro
16Gb chero chavanowana, haisi saizi yakanaka, uye zvakatonyanya huremu hunowanikwa nemifananidzo, uye kana ukatanga kurekodha mavhidhiyo pa1080fps kana mavhidhiyo pa60K, ini handitombo kukuudza.
Kana kuisa chero hombe application kana mutambo unorema kupfuura 1gb.
32Gb uye kana izvo zvine musoro, asi gumi nematanhatu harisi dambe, uyezve kuverenga kuti havazi 16gb vakadaro, kana zvisiri izvo pakati pehurongwa nevamwe, vanoramba vari pa16 vanobatsira.
Pindura kuna Mario Salvatore
Maitiro ekutarisa bhatiri rekuchaja macircuit eedu iPhone
Kushanda muApple Chitoro hakuna kunaka sezvazvinoratidzika